युट्युबबाट केहि बन्छन उद्यमी त केहि सेलिब्रिटी – HamroKatha
युट्युबबाट केहि बन्छन उद्यमी त केहि सेलिब्रिटी
यात्रा सुरु भएको चौथो महिनामा रायनको च्यानलले अत्याधिक भ्युज् पाउन थाल्यो । एकैपटक १ सय भन्दा बढि खेलौनाको रिभ्यु गरेको उनको उक्त भिडियो पश्चात रायनले फर्केर हेर्नु परेन । हरेक महिना भ्युज् दोव्वर हुँदै गयो । २०१६ को जनवरीमा त उनको च्यानलले १० लाख सब्स्क्राइबर पायो । २०१७ को जनवरी आइपुग्दा ५० लाख भन्दा धेरै सब्स्क्राइबर भए । अहिले उनको सब्स्क्राइबर १ करोड भन्दा बढि छन् ।
हाम्रो कथा २०७६ असार २३ गते १४:३२
तस्विर श्रोत : Guinness World Records Kids
पत्याउनै नसकिने गरि एउटा वालकले पैसा कमाएछन् । त्यो पनि जम्मा ६ वर्षको उमेरमा । पैसाको अंक सुन्दा तपाई हामीले जिब्रो टोक्नु पर्ने खालको छ । एक बालकले जम्मा एक वर्षमा झण्डै १ अरव १० करोड रुपैयाँ कमाएछन् ।
हाम्रो लागि खुलदुलीको विषय – कसरी कमायो ६ वर्षको बालकले त्यत्रो पैसा ? आखिर कोहोला त्यो बालक ? यी वालकले ३ वर्षको उमेरदेखि नै पैसा कमाउन थालेका हुन् ।
यी वालकको नाम हो, रायन । संसारभर छरिएर बसेका करोडौं वच्चा र तिनका अभिभावकहरुका लागी रायन अहिले ठूलो सेलिब्रिटि हुन् । आखिर के गरेछन् त रायनले ? जसले उनलाई सेलीब्रटी वनायो ।
उनी तीन वर्षको छँदै देखि, बाबुआमाले रायनले खेलेको, नयाँ नयाँ खेलौना खोलेको र त्यसलाई बयान गर्दै गरेको भिडियो बनाएर युट्युबमा ‘रायन टोयज् रिभ्यु’ नामको च्यानल संचलनमा ल्याएछन् । यसरी राखिएका भिडीयो चर्चित वन्न थालेछन् । च्यानलमा दर्शक वढ्न थालेसँगै आम्दानी पनि वढ्न थाल्यो । त्यसैगरी कमाउँदा कमाउँदै उनी सन् २०१६ को जुनबाट २०१७ को जुनसम्म युट्युबबाट अत्याधिक कमाउने व्यक्तिको सुचिमा आठौं नंबरमा थिए । यसरी रायन ६ वर्षको उमेरमा युट्युब उद्यमी भएका छन् ।
तर आज अरवौं कमाउने रायन त्यसै त्यति सजिलै यहाँ आइपुगेका भने होइन । उनका बावु आमाले सुरु शुरुमा भिडियो राख्दा १ सय जना भ्युअर्स पनि पाउन मुस्किल मुस्किल थियो । उनको यो पहिलो भिडियो हो । जहाँ उनी एउटा ट्रेनको सेट खोल्छन् । त्यसलाई जोड्छन् र त्यो सँग खेल्न थाल्छन् ।
रायन यो दुनियाँमा आउनुको पनि कारण छ । एकदिन उनले आफ्नी आमासँग एउटा प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नले जवाफ मात्र दिएन, उनलाई युट्युबमा एउटा साम्राज्य नै दियो । रायन पहिल्यैदेखि युट्युबमा टोयज् रिभ्यु च्यानलहरु हेर्ने गर्थे । अधिकांश यस्ता च्यानलहरुमा बालबालिका नै हुन्थे । एकदिन आमालाई सोधेछन्, ‘आमा युट्युबमा सबै बच्चाहरु आइरहँदा म किन नआएको ?’ आज उनी युट्युबमा आउँदैनन् मात्र, युट्युबबाट टन्नै कमाउँछन् ।
रायनको कथा यत्तिमै सिमित हुँदैन । जब जब रायनको कुनै खेलौनाको भिडियो पपुलर बन्छ त्यसले अमेरिकि बजारमा उक्त खेलौनाको सेल्स बृद्धि गरिदिन्छ । अनि रायन पनि जब कुनै खेलौनाको रिभ्यु गरिसक्छन् त्यसलाई च्यारिटिमा पठाइदिन्छन् । रायनकी आमाले समेत अब त उक्त युट्युब च्यानललाई पुर्णकालिन समय दिन, आफ्नो हाइस्कुलकमा शिक्षिकाको जागिर छाडेकी छिन् ।